အခြိနျ ၁၀ မိနဈအတှငျး ခွငျတှေ ၊ ယငျ ၊ ကွမျးပိုး ၊ ပိုးဟတျ အကုနျပွေးစတေဲ့ နညျးလမျး – KK Daily News
အခြိနျ ၁၀ မိနဈအတှငျး ခွငျတှေ ၊ ယငျ ၊ ကွမျးပိုး ၊ ပိုးဟတျ အကုနျပွေးစတေဲ့ နညျးလမျး
သငျ့ရဲ့အိမျမှာ ခွငျ၊ ယငျ၊ကွမျးပိုး ၊ပိုးဟတျ၊ဖွုတျကောငျတှနှေငျ့ အခွားမလိုလားအပျတဲ့ အငျးဆကျတှမြေားနလေို့ စိတျပကျြနရေပွီလား ?
သငျ့ရဲ့အိမျမှာ ဒါမှမဟုတျသငျ့ရဲ့အခနျးမှာခွငျတှေ ယငျတှေ ကွမျးပိုးတှေ ပိုးဟတျတှတျေကောငျတှနှေငျ့ အခွားမလိုလားအပျတဲ့ အငျးဆကျတှမြေားနလေို့ စိတျပကျြနရေပွီလား။
ပရုပျလုံး ၂ လုံး ၃ လုံးလောကျကို တဈရှုးစက်ကူနှငျ့ပတျပွီး မီးရှို့လိုကျပါ အမဲရောငျ မီးခိုးတှနှေငျ့အတူ တဈခနျးလုံး ပရုပျနံ့တှေ ထှကျလာပါလိမျ့မယျ။အခနျးတံခါးတှကေို ပိတျထားလိုကျပါ။ လောငျကြှမျးပွီးခြိနျမှ တံခါးတှကေိုဖှငျ့ပေးလိုကျပါ။
သူတို့အတှကျ အသကျမသပေဲ ထှကျပေါကျပေးခွငျးပါ။ခွငျဆေးခှေ ထှနျးခွငျးက သငျ့မှာ baby လေးတှအေတှကျ အန်တရယျရှိနိုငျသေးတယျ။ သူတို့အတှကျ အသကျမသပေဲ ထှကျပေါကျပေးခွငျးပါ။ခွငျဆေးခှေ ထှနျးခွငျးက သငျ့မှာ baby လေးတှအေတှကျ အန်တရယျရှိနိုငျသေးတယျ။
ပရုပျလုံးလောငျကြှမျးခြိနျကတော့ ၁၀မိနဈမြှသာပါ။baby ရှိနလြှေငျအပွငျမှာ ခတ်ေတရှောငျနလေိုကျပေါ့။တဈနကေို့ ၃ ကွိမျ ဖွငျ့ ၃ ရကျ ရှို့မညျဆိုလြှငျ အားလုံး ပွလေညျသှားမှာပါ သငျ့ရဲ့အဝတျအထညျတှမှောတောငျ ပရုပျနံ့ စှဲကနျြနရေဈခဲ့မှာပါ။ကုနျကငြှေ ဗမာငှေ ၂၀၀ မြှသာပါပဲ။ကွှကျတှေ အရမျးသောငျးကွမျးနလေငျြလညျး တှငျးဝမှာ လာရာလမျးမှာ ခပြေးထားလိုကျပါ အလုံးလိုကျပေါ့။
ကွှကျစိတျပကျြသှားတယျ ဒီလမျးထဲကို နောကျတဈခါဘယျတော့မှ မလာတော့ဘူး ဆိုတဲ့ လှမျးမိုးသီခငျြးလိုပါပဲ။ သရကျပငျတှေ အပှငျ့ဝငျပွီး ပွဒါးကွတယျဆိုလြှငျ အသီး မတငျတော့ပါဘူး။
ဒါကွောငျ့ သရကျစိုကျ ဥယဉျြပိုငျရှငျတှေ အနဖွေငျ့ ပရုပျလုံးကို အသီးအပှငျ့ဝငျခြိနျမှာ အဝတျစပါးပါးဖွငျ့ထုပျပွီး သရကျကိုငျးတှမှော လိုကျခြိတျပေးလိုကျပါ။ ပရုပျနံ့ကွောငျ့ ပွဒါး မကနြိုငျတော့ပဲ အသီးတငျပွီး အောငျမွငျဖွဈထှနျးမှာပါ။
အချိန် ၁၀ မိနစ်အတွင်း ခြင်တွေ ၊ ယင် ၊ ကြမ်းပိုး ၊ ပိုးဟတ် အကုန်ပြေးစေတဲ့ နည်းလမ်း
သင့်ရဲ့အိမ်မှာ ခြင်၊ ယင်၊ကြမ်းပိုး ၊ပိုးဟတ်၊ဖြုတ်ကောင်တွေနှင့် အခြားမလိုလားအပ်တဲ့ အင်းဆက်တွေများနေလို့ စိတ်ပျက်နေရပြီလား ?
သင့်ရဲ့အိမ်မှာ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အခန်းမှာခြင်တွေ ယင်တွေ ကြမ်းပိုးတွေ ပိုးဟတ်တွေတ်ကောင်တွေနှင့် အခြားမလိုလားအပ်တဲ့ အင်းဆက်တွေများနေလို့ စိတ်ပျက်နေရပြီလား။
ပရုပ်လုံး ၂ လုံး ၃ လုံးလောက်ကို တစ်ရှုးစက္ကူနှင့်ပတ်ပြီး မီးရှို့လိုက်ပါ အမဲရောင် မီးခိုးတွေနှင့်အတူ တစ်ခန်းလုံး ပရုပ်နံ့တွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။အခန်းတံခါးတွေကို ပိတ်ထားလိုက်ပါ။ လောင်ကျွမ်းပြီးချိန်မှ တံခါးတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။
သူတို့အတွက် အသက်မသေပဲ ထွက်ပေါက်ပေးခြင်းပါ။ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းခြင်းက သင့်မှာ baby လေးတွေအတွက် အန္တရယ်ရှိနိုင်သေးတယ်။ သူတို့အတွက် အသက်မသေပဲ ထွက်ပေါက်ပေးခြင်းပါ။ခြင်ဆေးခွေ ထွန်းခြင်းက သင့်မှာ baby လေးတွေအတွက် အန္တရယ်ရှိနိုင်သေးတယ်။
ပရုပ်လုံးလောင်ကျွမ်းချိန်ကတော့ ၁၀မိနစ်မျှသာပါ။baby ရှိနေလျှင်အပြင်မှာ ခေတ္တရှောင်နေလိုက်ပေါ့။တစ်နေ့ကို ၃ ကြိမ် ဖြင့် ၃ ရက် ရှို့မည်ဆိုလျှင် အားလုံး ပြေလည်သွားမှာပါ သင့်ရဲ့အဝတ်အထည်တွေမှာတောင် ပရုပ်နံ့ စွဲကျန်နေရစ်ခဲ့မှာပါ။ကုန်ကျငွေ ဗမာငွေ ၂၀၀ မျှသာပါပဲ။ကြွက်တွေ အရမ်းသောင်းကြမ်းနေလျင်လည်း တွင်းဝမှာ လာရာလမ်းမှာ ချပေးထားလိုက်ပါ အလုံးလိုက်ပေါ့။
ကြွက်စိတ်ပျက်သွားတယ် ဒီလမ်းထဲကို နောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှ မလာတော့ဘူး ဆိုတဲ့ လွှမ်းမိုးသီချင်းလိုပါပဲ။ သရက်ပင်တွေ အပွင့်ဝင်ပြီး ပြဒါးကြတယ်ဆိုလျှင် အသီး မတင်တော့ပါဘူး။
ဒါကြောင့် သရက်စိုက် ဥယျဉ်ပိုင်ရှင်တွေ အနေဖြင့် ပရုပ်လုံးကို အသီးအပွင့်ဝင်ချိန်မှာ အဝတ်စပါးပါးဖြင့်ထုပ်ပြီး သရက်ကိုင်းတွေမှာ လိုက်ချိတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပရုပ်နံ့ကြောင့် ပြဒါး မကျနိုင်တော့ပဲ အသီးတင်ပြီး အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှာပါ။
ဇှနျလ (၂၈)ရကျနမှေ့ (၃၀) ရကျနအေ့တှငျး မိုးကွီးရလြှေံနိုငျသညျ့မွို့မြားနှငျ့ မိုးလဝေသ သတငျး